Amasu Okumaketha Omakhalekhukhwini Aqala Ngo-2009 | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 4, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
The I-Web 2.0 Summit ibikezelwe I-Search Marketing ne-Marketing Marketing bezizoba nkulu ngo-2009. Ngibe nekhofi nomngani wami, u-Adam Small, ngoMgqibelo kanye nelakhe Inkampani Yezokumaketha Yeselula lapha e-Indy ube nokukhula okuphawulekayo - ikakhulukazi esigabeni sokugcina. Iningi lokukhula kwakhe kube ngenxa yokuqina API kanye nokuguquguquka kwakhelwe ngaphakathi kwezinhlelo zakhe zokumaketha zeselula.
Ukuthandwa kwabo bobabili laba balawuli kungenxa yezindleko zabo eziphansi kakhulu, umthelela omkhulu, umthelela olinganisekayo, kanye nekhono labakhangisi lokuhlanganisa nokuzenzela imikhankaso.
Ukumaketha Kwamaselula Kufaka:
Ukuthumela imiyalezo futhi Izaziso - ngenxa yamandla abo angena ngemvume asuselwa kwimvume, ngikholwa ukuthi ukumaketha kwamaselula okususelwa ku-SMS kuzofezekisa ukukhula okuqine kakhulu. Abantu manje basebenzisa amadivayisi wabo weselula 'njengesihlungi' sokuhlaselwa kwemiyalezo abayithola ngamanye ama-mediums.
Izicelo zeselula - ngezingcingo ze-iPhone, i-Blackberry Storm, ne-Google Android ezihamba phambili, kuyithuba elihle lokwakha izinhlelo zokusebenza noma amawijethi avumela abasebenzisi beselula ukuthi baxhumane nenkampani yakho noma isoftware yakho ngocingo. Akudingeki ukuthi kube ukusebenziseka okuqinile, uhlelo lokusebenza… khumbula ukuthi isikhombimsebenzisi esisebenza kahle kusiphequluli seselula singakuthola okudingayo!
Ukumaketha kwe-Bluetooth - Ukumaketha kwe-Bluetooth kuyinkambiso engathandeki, esuselwa ebusondeleni. Ngokuyinhloko, if umsebenzisi unikwe amandla i-Bluetooth futhi uhamba ngaphakathi kwendawo yakho, isexwayiso singathunyelwa efonini. Kudinga ukuxhawulwa nokukhetha ukungena, kepha njengoba umthengi engacelanga ukuxhumeka angiyena umlandeli.
Angifaki imiyalezo yezwi emndenini 'wokumaketha okuhambayo', kepha kufanelekile ukubheka ubuchwepheshe obuthile obufana neVontoo. Ku-cusp ephezulu yobuchwepheshe kukhona nezinsizakalo ezisebenzisa ukuqashelwa kwezwi njenge inkonzo yocingo lenkomfa Hey Otto!
Ngibonga uKatie ngokuthumela i- Isethulo seTrendspotting yeselula futhi kwangiphoqa ukuthi ngibhale lokhu okuthunyelwe!
Tags: 2009ukumaketha amaselula
UJamie | UJakob
Lokho kumaketha kwe-bluetooth kungishaya njengokuncane okungatheni empeleni. Ngijwayele ukugcina eyami ikhubazekile, nangenxa yama-blujan trojans abantu abangaziphathi kahle abazama ukusabalalisa.
Kuyathakazelisa ukubona ukuthi yini engase iqhamuke esikhathini esizayo sokumaketha kwamaselula. Ngivumelana nawe ukuthi ukumaketha kweBluetooth kubonakala kungathandeki, futhi njengoba kusho ophawulayo ongenhla, kungathi kuyakhasa.
Ocwaningweni lwami lokumaketha lweselula, ngithole lokhu okuthunyelwe okuwusizo mayelana nomehluko phakathi kokumaketha kweselula ne-mcommerce. http://lunchpail.knotice.com/2008/12/22/101-m-commerce-or-mobile-marketing/